Warshadda Furfuran ee Dhalada ah ee Shiinaha ee PVC iyo soosaarayaasha | SJJ
Furfurayaasha Dhalooyinka PVC ee jilicsan ayaa sida caadiga ah lagu sameeyaa daboolka PVC ee jilicsan iyo furitaanka birta ee dahaarka ah. Qaybta PVC waxaa lagu sameeyaa agab PVC jilicsan oo bey'ad ah, oo cabbir kala duwan leh, qaabab kala duwan ah oo loo shubay dhinta. 2D ama 3D laguma samayn karo dhinac kaliya, laakiin sidoo kale labada dhinacba. Xirfad aad u fiican, qaabab cusub iyo walxo aan sun ahayn ayaa la heli karaa wakhti kasta, si loogu sameeyo astaamo caadooyin ah ama halku-dhigyo lagu daabacay dusha.
Furfurayaasha Dhalada ee jilicsan ee PVC ayaa si duurjoog ah loogu adeegsadaa mar walba alaabada xayeysiinta ah, xusuusta ama hadiyadaha. Waxay caan ku yihiin baararka, qoysaska, iskuulada, xafladaha, dallacsiinta, hadiyadaha, tafaariiqda, hadiyadaha iwm. Furfurayaasha Dhalada ee PVC ee jilicsan waxaa lagu nuugi karaa qaboojiyaha dibedda oo leh lifaaqyada birlabka lifaaqyada. Agabyada deegaanku waxay dhaafi karaan USA ama imtixaanka Yurub.
Qalabka: PVC jilicsan + Birta
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Caadiga ah: birlabyo xoog leh, birlabyo jilicsan, Giraanta Furaha, isku xirayaasha birta, silsiladaha muhiimka ah, silsiladaha kubbadda iwm.
Hore: Daboolida Furaha PVC ee jilicsan
Xiga: Xirmooyinka Sawirka PVC ee jilicsan
3D Dhalo Fur
Furitaanka Dhalada Keychain
Keyring Furitaanka Dhalada
Furkii dhalada ee caadada u ahaa
furayaasha dhalada ee la habeeyay
Furitaanka Dhalada Silsiladda Furaha
PCV Dhalo Fur
fur dhalada PCV oo jilicsan